Momba anay - Hongyuan Wheel Group Co., Ltd.
Orinasa famokarana rojom-baravarankely manerana ny arabe
Hongyuan Wheel Group (HYWG) dia natsangana tamin'ny taona 1996 niaraka tamin'ilay teo alohany toy ny Anyang Hongyuan Steel Co., Ltd (AYHY). HYWG dia mpanamboatra matihanina amin'ny vy sy sisiny feno amin'ny karazana milina ivelan'ny arabe, toy ny fitaovana fananganana, milina fitrandrahana, forklift, fiara indostrialy.
Taorian'ny fampandrosoana 20 taona nitohy, HYWG dia nanjary mpitarika manerantany amin'ny tsenan'ny vy sy ny rim feno, ny kalitaony dia voaporofon'ny Global Caterpillar OEM, Volvo, John Deere ary XCMG. Androany HYWG dia manana fananana mihoatra ny 100 tapitrisa USD, mpiasa 1100, ivon-toeram-pamokarana 5 manokana ho an'ny OTR 3-PC & 5-PC rim, sisin'ny forklift, sisin'ny indostria ary vy vy.
Ny fahaizan'ny famokarana isan-taona dia nahatratra 300000 rims, vokatra aondrana any Amerika Avaratra, Eropa, Afrika, Aostralia ary faritra hafa. HYWG izao no mpamokatra rana OTR lehibe indrindra any Shina, ary mikasa ny ho lasa mpamokatra rigy 3 OTR manerantany.
Tamin'ny voalohany dia toy ny mpanamboatra vy kely, HYWG dia nanomboka namokatra vy vy hatramin'ny faran'ny taona 1990, tamin'ny 2010 HYWG dia nanjary mpitarika tsena ny vy sy ny vy boriborintany OTR, ny anjaran'ny tsena dia nahatratra 70% ary 90% tany Shina; ny vy boribory OTR dia naondrana tamin'ny mpamokatra rim manerantany toa an'i Titan sy GKN.
Nanomboka tamin'ny 2011, HYWG dia nanomboka namokatra OTR rim feno, lasa mpamatsy rim lehibe ho an'ny OEM manerantany toa ny Caterpillar, Volvo, John Deere ary XCMG. Manomboka amin'ny 4 "ka hatramin'ny 63", avy amin'ny 1-PC ka hatramin'ny 3-PC ary 5-PC, ny HYWG dia afaka manolotra vokatra feno rim-baravarankely manarona fitaovana fanamboarana, milina fitrandrahana, fiara indostrialy ary forklift. Manomboka amin'ny vy vita amin'ny rim ka hatrany amin'ny sisiny feno, manomboka amin'ny sisin'ny forklift kely indrindra ka hatramin'ny sisin'ny fitrandrahana lehibe indrindra, ny HYWG dia eny ivelan'ny Road Rim Whole Industry Chain Manufacturing Enterprise.
Fvokatra isan-karazany ull
Afaka mamokatra karazan-tsolatra OTR isan-karazany isika, anisan'izany ny sisin'ny 1-PC, 3-PC ary 5-PC. Haben'ny 4 "ka hatramin'ny 63" ho an'ny fitaovana fananganana, milina fitrandrahana, forklift ary fiara indostrialy.
Filanjana indostrialy iray manontolo
HYWG dia manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana sy ny fifehezana kalitao ho an'ny fitaovana, welding ary fandokoana. Ny laboratoara fanadinana sy ny lozisialy FEA dia mandroso amin'ny indostria.
Ireo mpanjifanay manan-danja
Mampiasa milina fantsom-boasary manerantany izahay miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso semi-auto mba hiantohana ny kalitaon'ny welding ambony sy milamina. Nampidirinay koa ny fifandraisana lalina eo anelanelan'ny rim base, flange ary ny gutter mba hananana ny kalitaon'ny welding tsy resy.
Ny tsipika e-coating dia manolotra ny firakotra tsara indrindra izay mifanena amin'ny fitsapana fanoherana ny harafesina mandritra ny ora maro, ny loko sy ny loko dia mifanaraka amin'ny fenitra OEM ambony toa ny CAT, Volvo ary John Deere. Azontsika atao ny manolotra ny tanjaka sy ny loko mando ho toy ny loko ambony, misy loko mihoatra ny 100 ny safidy. Miara-miasa amin'ny mpamatsy loko ambony toa ny PPG sy Nippon Paint izahay.
HYWG no orinasa mitarika ao amin'ny indostrian'ny OTR momba ny teknolojia, ny famokarana ary ny fitsapana. Misy mihoatra ny 200 ny enti-miasa amin'ny injenieran'ny mpiasa 1100 mikambana amin'ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fanohanana ara-teknika ny vokatra vita amin'ny vy, ny vy ary ny sisiny feno.
HYWG dia mpikambana fototra ao amin'ny Komitim-pirenena ho an'ny milina Earthmoving, dia nanomboka sy nandray anjara tamin'ny fametrahana ny fenitra nasionaly OTR sy rim vy. Izy io dia manana patanty famoronana firenena maherin'ny 100, ary mari-pahaizana momba ny ISO9001, ISO14001, ISO18001 ary TS16949.
Ny rindrambaiko FEA (Finite Element Analysis) manana fitaovana dia ahafahana manombana ny famolavolana ny drafitra voalohany, ny fitsapana fanoherana ny harafesina, ny fitsapana an-tsokosoko, ny fitsapana fihenjanana fantsom-panafody ary ireo fitaovana fanandramana ara-materialy izay mahatonga ny HYWG hanana ny fahaizany mitarika amin'ny indostria.
Hongyuan Wheel Group dia nanokatra orinasa vaovao ao Jiazuo Henan ho an'ny sisin'ny indostrialy sy forklift.
Hongyuan Wheel Group dia nahazo GTW izay mpanamboatra sisin'ny forklift.
Hongyaun Wheel Group dia nanokatra orinasa farany ambony OTR any Jiaxing Zhejiang.
Ny Hongyuan Wheel Group dia nanokatra ny orinasan-tsambo OTR voalohany tao Anyang Henan.
Ny orinasan-tsolika AnYang Hongyuan dia nanomboka namokatra vy mifono kamiao sy vy boribory OTR.
Nandritra ny 20 taona ny fampandrosoana mitohy HYWG dia lasa mpanamboatra sisintany OTR lehibe indrindra any Shina, ao anatin'ny 10 taona ho avy HYWG mikendry ny ho mpanamboatra rivo-pirinty Top 3 OTR manerantany. Izahay dia manangana ho orinasa mpamokatra rakitry ny indostria ivelan'ny lalana.
Tongava eran'izao tontolo izao tsy ho eny an-dàlana.
Soatoavina eo amin'ny orinasa
Mamorona soatoavina ho an'ny mpanjifa, mamorona fahatsapana ho an'ny mpiasa, mandray andraikitra amin'ny fiaraha-monina.
Miasa mafy, tsy mivadika ary manao ny marina, fiaraha-miasa mandresy.
Ny sasany amin'ireo tetikasantsika mpanjifa
Fampirantiana ny tanjaky ny fampirantiana
Nandray anjara tamin'ny fampirantiana kodiarana Cologne tamin'ny taona 2018 tany Alemana.